Xubnaha Wasiirada ee maantay tagay Kismaayo oo kulamo la yeeshay mas’uuliyiinta Jubaland – Radio Muqdisho
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Mudane C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odowaa), Wasiirka Tamarta iyo Badroolka Mudane Maxamed Mukhtaar iyo Wasiiru dowlaha Xafiiska Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane C/raxmaan Dheere markii ay gaareen magaalada Kismaayo waxaa ay tageen xarunta uu ka socdo shirka xulista Baarlamaanka maamulka Jubaland.
Mudane C/raxmaan Maxamed Xuseen Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federaalka oo la hadlay eregada madasha joogtay ayaa sheegay in maamulka Jubaland wax qaban muuqda ka sameeyeen gobolada Juabooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo oo ay kamid tahay soo celinta nabadda iyo dib u dhiska.
Wasiirka Arrmaha gudaha ayaa intaa ku daray in uu ku faraxsan yahay shaqada iyo howlaha ay wadaan maamulka Jubaland oo ku aadan dhameystirka maamulka isagoo tilmaamay in dowladda dhexe ay gacan ka geysan doono howlaha maamulka Jubaland uu sameynaayo.
Sidoo kale waxaa kulanka hadal ka jeediyay Madaxweynaha maamulka Jubaland Sheekh Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe) waxaana uu tilmaamay in Jubaland ay tahay meel Soomaali oo dhan u siman tahay isla markaana lagu soo dhaweynaayo.
Xubnaha Wefdiga oo uu hogaaminaayo Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Maxamed Xuseen ee xukuumadda Soomaaliya waxaa ay kulamo la yeesheen mas’uuliyiinta sare ee maamulka Jubaland ayagoo kala hadlay arimo ay kamid yihiin Amniga, dib u heshiisiinta iyo dhameystirka maamulka Jubaland.
Kulamadaasi markii ay soo idlaadeen ayaa waxaa si wadajir ah shirjaraa’id u qabtay Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federaalka iyo Madaxweynaha maamulka Jubaland.
Madaxweynaha maamulka Jubaland Sheekh Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe) ayaa sheegay in wefdiga dowladda dhexe ka socda imaanshahooda Kismaayo ay la xiriirtay in ay la socdaan arrimaha ku saabsan dhameystirka maamulka oo ah xulista Baarlamaanka Jubaland isla markaana ay soo dhaweynayaan dadaalada dowladda dhexe ay kaga gacan siinayso maamulka.
Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federaalka C/raxamaan Maxamed Xuseen (Odawaa) ayaa sheegay in u jeedada ay u tageen magaalada Kismaayo ku saabsan tahay arimo dhowr ah oo ay kamid tahay ka qeyb qaadashada xulista Baarlamaanka maamulka Jubaland.
“Runtii waxaa warbixin dhameystiran nalaga siiyay sidii loo xuley odayaashii iyo dhaqankii waana la dhacnay, maamulka waxaa uu noo sheegay in la sameeyay gudiga farsamo iyo gudigan xalinta khilaafaadka, wasaaradda kooxdii halkan ka joogtay waan kordhinay, runtii kalsooni badan ayaa halkan ka jirta oo maamulku ka shaqeeyay mudadii uu jirey” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha gudaha.
Wefdigan maanta tagay magaalada Kismaayo oo uu horkacayay Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federaalka ayna kamid ahaayeen Wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa qeyb ka ah qorshiyaasha dowladda Soomaaliya ku doonayso in ay salka ugu dhigto nidaamka Federaalka guud ahaan dalka oo dhan.